Al-Shabaab oo ugu hanjabay shacabka Ugandha dib u doorashada Musaveni – SBC
Al-Shabaab oo ugu hanjabay shacabka Ugandha dib u doorashada Musaveni
Xarakada Al-Shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya ayaa digniin cusub oo xoogan oo ay soo saareen waxay ku sheegeen in shacabka dalka Ugandha ay dareemi doonaan xanuun adag ayna ka shaleyn doonaan dib u doorashada madaxweynaha wadanka Ugandha Yuweri Museveni oo hogaanka talada dalkaasi.
Ugandan waxay laf dhabar u tahay hawlgalka midowga Afrika uu ciidamada ku keenay Soomaaliya, kuwaasi oo taageeraya dawlada itaalka daran ee Soomaaliya si ay uga hortagaan khatarta soo wajahaysa xoogaga Al-Shabaab oo gacanta ku haya badi wadanka.
Bayaan ka soo baxay xarakada Al-Shabaab ayaa digniin culus waxay ugu jeediyeen shacabka Ugandha inay u dulqaataan jawaabta ka imaan doonta dib u doorashada madaxweyne Museveni.
“Waa adinka, shacabkiina Ugandha, kuwa ay ku kici doonto qiimaha xoogan soo faragalinta ciidamadiina wadankeena” ayay ku yiraahdeen bayaan ay soo saareen xoogaga Al-Shabaab.
Bayaanka ayaa sidoo kale lagu yiri “Waxaad hada qaadateen go’aan aad dib ugu dooranaysana Museveni waana xiligii aad u dulqaadan laheydeen cawaaqibka doorashadiina”.
Uganda waxaa ka socda kala bar 9-ka kun ee ciidamada AMISOM ee ku sugan Magaalada Muqdisho, waxaana markii afaraad loo dhaariyey Yuweri Museveni madaxweynaha wadanka Ugandha isagoo xilka qabtey sanadkii 1986-dii.
Doorashadiisa bishii February ee sanadkan waxaa si weyn u dhaliiley qaar ka mid ah goobjoogayaasha caalamiga ah iyo kuwa gudaha, iyagoo dhaliilay sida fudud ee uu ku hantey aqlabiyada codadka doorashada.
Al- Shabaab waxay sheegteen masuuliyada weeraradii qarax ee ka dhacay magaalada Kambala ee wadanka Ugandha bishii July ee 2010, xiligaasi oo laba qarax oo ismiidaamin ah ay ku dhinteen 76 qof.
Laga soo bilaabo xiligaasi ay dhaceenq qaraxyadaasi Madaxweyne Museveni wuxuu sheegayey in uu diyaar u yahay in Soomaaliya uu u soo diro 20 kun oo ciidamo dheeraad ah si ay u cirib tiraan xoogaga Islaamiyiinta, laakiin wuxuu waayey taageerada caalami ah oo biritaarta qorshihiisa ciidamo kordhinta.
Museveni waxaa kale oo uu dhawr jeer isku dayey in uu helo ogolaansho dhameystiran oo la xiriira in ciidamadiisu ay dagaal dhameystiraan ku qaadaan xoogaga Al-Shabaab xitaa hadii aan la soo weerarin.
Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa si adag u diiday codsigaasi ka yimid Madaxweynaha Ugandha.